गत तिहारदेखि उपत्यकावासी लोडसेडिङमुक्त भएर नयाँ जीवनशैली पाएको अनुभव गरिरहेका छन् । उपत्यकापछि पोखरा र चितवनमा पनि आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ । देशका अन्य प्रमुख स्थानमा लोडसेडिङ नगण्य छन्, बढीमा तीन घन्टा । बिहान–बेलुकी उद्योग क्षेत्रमा सात घन्टासम्म लोडसेडिङ छ । विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो प्रणाली बलियो बनाउँदै लगेको छ । यसले अबको जेठपछि (हिउँदमा समेत) लोडसेडिङ नुहने संकेत दिएको छ । यही सेरोफेरोमा कसरी लोडसेडिङ कम भयो ? यसले मुलुकको अर्थतन्त्र एवं सामाजिक जीवनमा कस्तो असर पार्‍यो ? आगामी दिनमा बिजुलीमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना कसरी कार्यान्वयन हुँदैछ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्ण पोस्ट्को ‘न्युज रुम’मा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आफ्ना अनुभव एवं विचार व्यक्त गरे ।
अब बिजुलीको माग बढाउने
मलाई काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भन्ने थियो । तर यतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थिएन । तर अहिले यतिसम्म काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव भएको छ । काठमाडौं, पोखराको मात्र लोडसेडिङ अन्त्य गरेर हामीलाई सुख थिएन । हामीले तराईतिर लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न नसकेको भए सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय त्यही हुन्थ्यो । त्यहाँ व्यापक विरोध आउने सम्भावना थियो । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा हामीले धेरै समय खर्चियौं । उद्योग, होटल र सर्वसाधारणले सहयोग गरे । यसो गरौं न भन्दा उद्योगका साथीहरूले मान्नुभयो । उहाँहरूलाई पनि हिजोको भन्दा धेरै सुविधा पाएको अनुभव भएको छ । त्यसमा पनि सर्वसाधारणले धेरै सुविधा पाएका छन् । हिजो बत्ती आउँदा पनि उद्योग चल्दैनथ्यो, किनभने अत्यधिक खपत समय (पिकआवर) मा बत्ती आउनासाथ सबैले आफ्ना उपकरण (हिटर, पंखा, पानी तान्ने पम्प आदि) चलाउँथे । त्यसले भोल्टेज नै पुग्दैनथ्यो र मेसिन, उपकरण चल्दैनथे । तर अहिले उपभोक्ताको व्यवहारमा समेत परिवर्तन आएको छ ।
धेरै बिजुली खपत हुने बेलुकीको समयमा पनि उपभोक्ताले बढी बिजुली खर्च हुने उपकरण कम चलाएका छन् । त्यो कसरी थाहा हुन्छ भने भार प्रेषण केन्द्रमा हामी बेलुकी बसेर हेथ्र्याैं । अहिले ‘पिक’ बिजुलीलाई व्यवस्थित गरेका छौं । वास्तवमा यतिबेला ‘पिक डिमान्ड’ एक हजार पाँच सय मेगावाट हुनुपर्ने हो । हाम्रो माग प्रक्षेपणले पनि त्यही देखाउँथ्यो । अहिले १३ सय मेगावाटको हाराहारीमा रह्यो यसपालि । अर्काेतर्फ, उत्पादन यही महिनामा सबैभन्दा कम हुन्छ । यो लोडसेडिङ कम हुनुमा हाम्रो व्यवस्थापन मात्रै सबै कुरा होइन । सबैबाट सहयोग पाएका छौं । हामीले व्यवस्थापन त गरेका छौं । सञ्चालनतर्फ सक्दो उत्पादन गरेका छौं । अहिले प्राधिकरणको नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) उत्पादन जम्मा तीन सय मेगावाट छ । कुलेखानी बेलुका दुई–तीन घन्टा चलाइएको छ । तर हामीले बेलुका ‘पिक’मा करिब ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छाैं । नेपालको विद्युत् इतिहासमा ‘पिकिङ पावर प्लान्ट’ (दिनभरि पानी जम्मा गरेर बेलुकी उत्पादन गर्ने) जडित क्षमतामा चलाएका छौं । कालीगण्डकी ‘ए’ अहिले पनि बेलुकीपख एक सय ४४ मेगावाटमै उत्पादन हुन्छ ।
सबै गरेर बेलुका ‘पिक आवर’मा अहिले नौ सय मेगावाट दिन सकिरहेका छौं । विद्युत् गृहहरू मर्मतसम्भार गर्ने ढाँचा पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेका छौं । सबै विद्युत् गृहमा सबै युनिट चल्दैनन् अहिले, एउटा युनिट मात्र चल्छ, मर्मत सम्भारका बेला । सबै विद्युत् गृहलाई एकैपटक मर्मत र सञ्चालनमा ल्याउँदैनौं । पहिले एकैचोटि मर्मत हुन्थ्यो, त्यसले पिकिङ आउँदैनथ्यो । हामीले सानो विद्युत् गृहलाई पनि पिकिङ दिएका छौं । हिजो गण्डक विद्युत् गृह चल्दैनथ्यो । भारतले सिँचाइको वार्षिक मर्मतका लागि सिँचाइ प्रणाली बन्द गरेका बेला विशेष अनुरोध गरेर गण्डकबाट पाँच मेगावाट उत्पादन गरिरहेका छौं । त्यो पाँच मेगावाट प्रणालीका लागि ३५–४० मेगावाटसरह हो । हिजो रामनगर (भारत)बाट बिजुली आयात गर्न सक्दैनथ्यौं । किनभने त्यहाँबाट आयात गर्‍यो भने भोल्टेज यति डाउन हुन्थ्यो कि चल्दै चल्दैनथ्यो । अहिले बुटबल क्षेत्रमा भोल्टेजको समस्या नै छैन । सानातिना कुराले पनि धेरै मद्दत गरेको छ । खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनमा रातदिन मेहनत गर्‍याैं, कुलेखानी–स्युचाटार प्रसारण लाइन पूरा गर्‍याैं र चपली सबस्टेशन (९० एमभीए)को क्षमता वृद्धि कार्य पनि सक्यौं । यसले प्राधिकरणको प्रणाली बलियो भएको छ । उपत्यकामा बिजुली आपूर्ति गर्न सहज भएको छ । चपली, खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन नबनेको भए उपत्यकाभित्र बिजुली आपूर्ति गर्न सकिँदैथ्यो र आन्तरिक लोडसेडिङ हुने थियो । यो विषय एउटा पक्ष भयो ।
अब निरन्तरता के रहन्छ भन्ने अर्काे विषय छ । मेरो विचारमा अब अहिले आपूर्ति भइरहेको बिजुलीको निरन्तरताको त्यति चिन्ता छैन । वैशाख–जेठपछि त समस्यै छैन । त्यतिबेला उद्योगलाई पनि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था हुनेछैन । अर्काे वर्षको सुक्खायाम धेरै सुविधाजनक छ । किनभने धेरै लचकता आइसकेको छ । हामीले माग व्यवस्थापनअन्तर्गत ‘पिक लोड’लाई स्थिर मात्र राख्न सक्यौं भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ । ‘पिक लोड’लाई स्थिर राख्न हामी बृहत् रूपमा माग व्यवस्थापन गर्नेछौं अर्काे वर्षका लागि । आगामी वर्षका लागि निजीक्षेत्र पनि आउँदैछ । प्राधिकरणको चमेलिया (३० मेगावाट) र कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) पनि आउँदैछ ।
चमेलिया आएपछि सुदूरपश्चिमको लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ । आगामी वर्षको सुक्खायामलाई पनि समस्या छैन । यसपालिको बाँकी दुई महिना मात्र हो लोड व्यवस्थापन गर्न । त्यसपछिको अवस्था भनेको माग बढाउने नै हो । मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघलाई लेखेरै पठाएको छु, ‘तपाईंहरू (उद्योग)को पाँच वर्षको ऊर्जा माग के हो ? ’ मैले पाँच वर्षभित्र कुनकुन आयोजना आउँछन्, सबै हिसाब निकालेको छु । उहाँहरूबाट पनि ऊर्जा खपतको प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । महासंघबाट औपचारिक रूपमा त आएको छैन, व्यक्तिगत रूपमा करिब दुई सय मेगावाटको माग आएको छ । दिन सक्यो भने सयदेखि डेढ सय मेगावाट बिजुली अहिले नै खपत हुने अवस्था छ । हिजो बर्खायाममा बिजुली खेर जान्छ, माग छैन, बिजुली खेर गएपछि प्राधिकरण डुब्छ भन्ने गरिन्थ्यो, त्यसो होइन । ऊर्जा उपलब्ध हुने हो भने यति माग आउँछ, त्यो हामीले देखेका छौं । ऊर्जा उपलब्धताको प्रतिबद्धता दिन सक्नुपर्छ । ऊर्जा उपलब्ध भइसकेपछि बर्खायाममा कसरी खपत गर्ने र हिउँदमा कसरी उपयोग गर्ने हामीलाई थाहा छ ।
अहिले हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गरिएको छ । तर भारतीय बिजुलीले घाटा बढायो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । त्यो सत्य होइन । अर्थतन्त्रमा एक युनिट बिजुली थप गर्‍यो भने त्यसले दसगुणा मूल्य अभिवृद्धि गर्छ । यो साउथ एसिया रिजनल इनिसिएटिभ—इनर्जी (सारी–ई)ले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । एक युनिटले अर्थतन्त्रमा दसगुणा असर पार्छ भने त्यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कति योगदान पु¥याउला, छर्लंगै छ । एक त अहिले आयात महँगो छैन । सुक्खायाममा स्वदेशका निजीक्षेत्रलाई नै हामीले प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा तिरिरहेका छौं । अहिले भारतबाट करिब तीन सय ८० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । गत वर्ष तीन सय ४५ मेगावाट आयात भएकै हो । यो आयात प्रतियुनिट भारु ३.६० पैसा (पाँच रुपैयाँ ७६ पैसा) हो । फेरि यो आयात हामी सुक्खायामका लागि मात्र गर्ने हो । त्यो हेर्दा भारतीय बिजुली हामीलाई सस्तो नै छ । अर्थतन्त्रमा उपलब्ध यो बिजुलीले धेरै किसिमले हामीलाई फाइदा गरिरहेको छ, त्यो पनि गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने विषय हो ।
अब यस्तो बिजुलीको परिणाम के आयो त ? आज अन्नपूर्ण पोस्ट्ले नै उदयपुर सिमेन्ट बिजुली पाएर २५ वर्षपछि नाफा आर्जन गर्न सुरु गर्‍यो भनेर समाचार छाप्यो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । उद्योग मात्र होइन, सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यतिकै फाइदा पुगेको छ । विद्यार्थीले पढ्न पाएका छन्, कार्यालय सञ्चालनमा समस्या छैन, दक्षता बढेको छ । काम गर्ने वातावरण परिवर्तन भएको छ । आर्थिक–सामाजिक तहमा त बिजुली आपूर्तिको ठूलो प्रभाव छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै राम्रो प्रभाव परेको छ । अस्पतालले डिजेल चलाउनुपरेको छैन, लागत घटेको छ । घरमा अक्सिजन लिएर बस्ने र घरमै डायलासिस गर्ने कति धेरै रहेछन् । बिजुलीविना यी सम्भव हुँदैन । बत्ती नियमित हुँदा त्यसको असर कति ठूलो देखियो । सेवा क्षेत्र त्यत्तिकै लाभान्वित छ । खुद्रा व्यापारीदेखि उद्योगपतिसम्मको व्यापार बढेको छ । यी सबै क्रियाकलापले मुलुककै अर्थतन्त्र (जीडीपी)मा योगदान गर्छ ।
यसपालि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढ्छ । अहिले हामी एसियाकै सबैभन्दा कम बिजुली खपत गर्नेमा छौं— प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत एक सय ३० युनिट छ । भारतमा हजार युनिट छ, चीनको चार हजार युनिट । हामी सबैभन्दा कम ऊर्जा खपत गछौं, तर यहाँ बर्खायाममा बिजुली खेर जान्छ भन्छौं । ऊर्जा खपत बढ्यो भने आयात प्रतिस्थापन हुन्छ— ग्यास, डिजेललगायत पेट्रोलियमको । सिमेन्ट उद्योगहरूले बिजुली पाए भने सिमेन्ट नै आयात गर्नुपर्दैन । मुख्य कुरा हिजो निराश भएका जनता आज आशावादी भएका छन् । हिजो केही पनि हुँदैन भनेर जनता निराश थिए । अब केही हुन्छ है भन्ने ठूलो जागरण आएको छ । त्यो सँगसँगै आकांक्षा पनि बढेको छ । अर्कोतर्फ, प्राधिकरणप्रति आमजनता, मिडियाको हेराइ परिवर्तन भएको छ । यो कुरा हाम्रा लागि ठूलो सम्पत्ति भएको छ । हिजो प्राधिकरणले राम्रै काम गर्दा पनि गलत गर्‍यो भन्थे ।
तर यो काम एउटा कुलमान घिसिङले मात्र गरेको होइन, हाम्रो टिम राम्रो छ । टिमले गरेको हो । मन्त्रीज्यूले राम्रो टिम बनाउनुभएको छ । अझ चुहावट नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ, यो पहिलोपटक हो । यसको परिणाम त आयो । कति मान्छे समातिए । अहिले तीन प्रतिशत चुहावट घटिसक्यो, एक अर्ब रुपैयाँ बचत गरेको छ । यो चुहावट घट्दै जाँदा प्राधिकरण नाफामा जान्छ । प्राधिकरण अब नाफामा जाँदैछ । निजीक्षेत्रका लागि हामीले गरिरहेका छौं । सरकारले गर्ने सरकारले गरिरहेको छ । प्राधिकरणले गर्ने गरिरहेको छ । हामीले हिजो बिजुली खपत हुँदैन भनेर ‘टेक अर पे’ पीपीए गरिएको थियो, त्यसलाई हटाएका छौं । करिब सात सय मेगावाटको आयोजनाका पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ थियो । अब त्यो हटिसकेपछि तिनमा लगानी हुन्छ । हाइड्रोलजिकल रिस्क (खोलामा कम पानी हुँदा बिजुली उत्पादन घटेर प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने जरिवाना) हटाएका छौं । प्रसारण शुल्क तिरेर कसैले बिजुली उत्पादन गरी अरूलाई बेच्छ भने त्यसको बन्दोबस्ती गर्न लागेका छौं ।
मलाई लाग्छ, नेपालको जलविद्युत्मा यी ठूला निर्णय हुन् । बाँकी केही कुरा छन्, ती पनि हामी छिट्टै गर्दैछौं । पिकिङ ऊर्जाका लागि हामीले छुट्टै मूल्य तोकेका छौं । अब निजीक्षेत्र पनि जलाशययुक्त बिजुलीमा आउनेछन् । अहिले दुई सय मेगावाटको लगानी नेपाली बैंकहरूले गर्न सक्ने भएका छन् । आगामी दिनमा निजीक्षेत्रको विश्वासको तह अझ वृद्धि हुँदै जाने देखिएको छ । अब तीन वर्षभित्र न्यूनतम १२ सय मेगावाट बिजुली आउँछ । निजी क्षेत्रबाट हरेक वर्ष दुई सय मेगावाटका दरले आउँछ । यसपछि हाम्रो दुई हजार मेगावाटको प्रणाली बन्छ । दीर्घकालमा प्राधिकरणले मात्र २५ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदैछ ।
प्राधिकरणको अबको मुख्य लक्ष्य निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरूको छिटो निर्माण हो । सोलु, काबेली, कालीगण्डकी दोर्दी कोरिडरहरूजस्ता जुन अत्यन्त नाजुक अवस्थामा थिए, तिनलाई छिटो सक्नु हो । एक–दुई वर्षभित्रै आउने जलविद्युत् आयोजनालाई लक्षित गरेर प्रसारण लाइनलाई तीव्रता दिएका छौं । हामीले दीर्घकालीन रूपमा पूर्व–पश्चिम (७६५ केभीसम्मका) र उत्तर–दक्षिण प्रसारण लाइन निर्माणलाई जोड दिएका छौं । अहिले देशभरि वितरण प्रणाली जम्मा एक हजार छ सय मेगावाटको मात्र छ । अब काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दुई हजार मेगावाटको प्रणाली बनाउँदैछौं ।
काठमाडौंवरिपरि खिम्ती–लप्सीफेदी र नौबीसे–लप्सीफेदीको २२० केभीको रिङ मेन (प्रसारण जालो) बनेपछि उपत्यकामा दुई हजार मेगावाटको वितरण प्रणाली बन्छ, हामी त्यतातिर लागेका छौं । यी सबै योजना पूरा भइसकेपछि नेपाल विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनेछ । पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित हुनेछ । हामी वितरण प्रणाली सुदृढ गर्नेतर्फ लागेका छौं । यसले भोलि विद्युत् उपभोग र खपतलाई वृद्धि गरी आयात विस्थापन गर्नेछ र मुलुकको समग्र ऊर्जा सुरक्षा सुरक्षित पार्नेछ ।
निजीक्षेत्र उत्साहित छ
उद्योगका लागि ऊर्जा ‘लाइफ ब्लड’जस्तै हो । शक्ति भए मात्र मानिस चल्न सकेजस्तै उद्योगका लागि ऊर्जा पनि अत्यावश्यक वस्तु हो । लोडसेडिङको अन्त्यसँगै यो समयमा विगतका वर्षमा ठूला उद्योग मात्र नभई साना उद्योग पनि जेनेरेटर नभएको अवस्थामा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थियो । उक्त अवस्था अहिले अन्त्य भएको छ ।
उद्योगहरू सहज रूपमा सञ्चालन भएका छन् । ऊर्जाका कारण उद्योग बन्द भयो भन्नुपर्ने अवस्था छैन । जेनेरेटर हुनेले पनि बत्ती आएको समयमा उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था छ । तर विगतका वर्षमा बत्ती आए पनि ‘लोड’ अपुग हुँदा काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन । वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपथ्र्याे । मेरो आफ्नै उद्योगमा पनि बत्ती आएको समयमै पनि मेसिन चल्ने अवस्था थिएन । मैले लोड नपुगेका कारण ट्रान्स्फर्मरसमेत ‘अर्डर’ गरेर ल्याइसकेको थिएँ । तर अहिले त्यसको आवश्यकतै परेन । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले दिएको बत्तीको ‘लोड’बाटै मेसिन चलिरहेको छ ।
उद्योग चल्ने सिस्टम पनि आआफ्नै थियो । एक–दुई घन्टा बत्ती नहुँदा आवश्यक कच्चापदार्थ पनि खेर जाने अवस्था थियो । अहिले उद्योगी निकै उत्साहित छन् । सबैले कुलमानजीलाई शुभकामना दिइरहेका छन् । यो आश्र्चय भयो भनेका छन् । उद्योगीहरूले बिजुली पाएका कारण उद्योगहरूमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव परेको छ । जुन हिसाबले ऊर्जा आयात हुने अवस्था थियो त्यो पनि घटेको छ । डिजेल र त्यसमा लाग्ने जेनेरेटर, इन्भर्टर, ब्याट्रीलगायतको आयात विस्तारै घट्दै छ । यो व्यवसाय विस्थापित हुने अवस्थामा छ ।
ऊर्जाकै कारण यो वर्ष उद्योगको उत्पादनमा वृद्धि आउनेछ । आवश्यक ऊर्जा पाएसँगै विद्युतीय सामानको प्रयोग बढ्नेछ । राज्यले ६ देखि ७ प्रतिशतले मात्रै ऊर्जा प्रयोग गर्नेे सोचेको थियो, त्यो बढेको छ । अब ऊर्जा माग बढ्छ । योसँगै बढीभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योग नेपाल आउन उत्साहित हुनेछन् । यसको मूल्यमा भने केही सोच्नुपर्छ । तत्कालको अवस्थामा ३० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा डिजेल प्रयोग गरेर ऊर्जा प्रयोग भइरहेको थियो । ल्यान्डलाइनबाट आउने बिजुलीले हाम्रो ‘कस्ट अफ प्रडक्सन’ प्रभाव पार्छ । तर अहिले बैंकको ब्याजदरले गर्दा नसोचेको भन्दा बढी पर्न गएको छ । यो बैंकहरूको ब्याजदर बढी लिने प्रक्रिया कृत्रिम हो ।
बैंकहरूले दुई–चार अर्ब रुपैयाँ १२ देखि १५ प्रतिशतमा लिने र अरू सबै ऋणमा १२ प्रतिशत ब्याज लिने गरेका छन् । यसमा उद्योगीले गलत काम भएको बताइरहेका छन् । डिपोजिटमा पनि बढी ब्याज दिएका छैनन् । जसरी हुन्छ, लोनको ब्याज मात्रै बढी लिने काम भइरहेको छ । सम्रगमा बिजुलीका करण उद्योग क्षेत्रको ‘आउटपुट’मा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । यसमा दुईमत छैन । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगमा केही समय लोडसेडिङ गरेरै भए पनि जनतालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । तर अब जुन उद्योगले धेरै ऊर्जा खपत गर्छ, उसलाई केही कम भने गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन बढेपछि त्यो पनि ‘अप–डाउन’ हुने हामीलाई थाहा छ ।
अहिले पनि प्राधिकरणले तीन तहको महसुल निर्धारण गरेको छ । जसले राति बिजुली प्रयोग गर्छ, उसले कम नै तिर्ने गरेको छ । अब बिजुलीको खपत बढाउन जसले धेरै बिजुली प्रयोग गर्छ, त्यस्ता उद्योगलाई रकममा केही छुट दिनुपर्ने दिन आएको छ । राज्य र जनता दुवैलाई समृद्ध बनाउने भनेको राज्यसँग भएको स्रोतले नै हो । देशसँग सार्वजनिक स्रोत जे छ, त्यसको दोहन गर्नैपर्छ । हामीसँग पानी छ भने त्यसको नै बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने हो । यसबाट नै देश विकास सम्भव छ । यसका लागि राज्यले केही सहज ऐनकानुन र प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजीक्षेत्र लगानी विस्तारका लागि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ।
अहिले उद्योग विस्तारका लागि सहज हुने नियमकानुन आवश्यक छ । केही सुविधा पनि दिनुपर्छ । कुनै एउटा प्याकेज देऊ मात्रै भनेर हामीले सरकारलाई मागेका छौं । राज्यबाट त्यस्तो केही हुन नसकेको अवस्थामा ऊर्जाबाट पाएको राहत पनि उद्योग–व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण छ ।
सरकारी घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
यसअघि (कुलमान घिसिङ आउनुअघि)को म्यानेजमेन्ट टिमले दिएको सूचनाका आधारमा हामीले पनि अझै नेपालमा १५ वर्षसम्म लोडसेडिङ हुन्छ भन्दै आएका थियौं । यो अहिले झूटो सावित भएको छ । अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय व्यवस्थापन नै रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । भइरहेकै कुराहरूको राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको अवस्थामा हामीले समस्या समाधान गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने देखिएको छ ।
ऊर्जाक्षेत्रमा कार्यरत मानिसको व्यवस्थापन राम्रो भएको अवस्थामा उत्पादन छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । सय वर्षको इतिहासमा हामीले आठ सय मेगावाटमात्रै उत्पादन गरिरहेका छौं । आगामी दुई वर्षभित्र उत्पादन दोब्बर हुने अवस्था छ । गत वर्षमात्रै निजीक्षेत्रबाट करिब सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन भएको थियो । आगामी वर्षमा मात्रै दुई सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन थपिँदै छ । यो किन आयो ? कसरी आयो ? भने कुरामा सबैका आआफ्ना तर्क छन् । यसको प्रमुख कुरा भनेको राज्यले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न केही सहुलियतलगायत नीतिगत कुरा दिन्छु भनेर गरेको घोषणा नै हो । घोषणाकै आधारमा निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताले योजना अगाडि बढाएका छन् । कुनैकुनै प्राप्त पनि भएका छन् । धेरैजसो प्राप्त हुन बाँकी छ । तर एउटा कुरो, अघिल्ला सरकारले लागू गरेको ऊर्जासंकट कार्ययोजना अहिलेको सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्ने जमर्काे गरिरहेको छ, यो स्वागतयोग्य छ ।
हामी निजीक्षेत्र ऊर्जासंकट कार्ययोजनामा उल्लिखित र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गर्नुभएको ३७ बुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छौं । अहिले सञ्चालनमा आएका र विद्य्ुत् प्राधिकरणसित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका तीन हजारभन्दा बढी आयोजना छन् । ती आयोजनामा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता छ । यो निजीक्षेत्रका लागि खुसीको कुरा हो । अब राज्यले पनि आगामी दिनमा आउने योजनामा यस्तो सुविधा रहनेछ भनेर घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय जसरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा एउटा ऊर्जामन्त्रीले यो क्षेत्रमा सुधार गरेका छन्, त्यसरी नै सबैले काम गर्ने हो भने देश विकासको बाटो खुल्नेछ । राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्रले मात्रै काम हुँदैन । जसरी ऊर्जाक्षेत्रमा अहिले परिर्वतन आएको छ, त्यसरी नै परिर्वत ल्याउने हो भने नेपाल आर्थिक रूपमा सक्षम हुन कुनै धेरै समय कुर्नुपर्दैन । यो सबैका लागि उदाहरण भएको छ । सबैले यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
खपत कसरी बढाउने भन्ने प्रश्न नै अबको परिर्वतन हो । हामीले धेरै वस्तु आयात गरिरहेका छौं । उत्पादन बढ्नेमा कुनै शंका नभएको अवस्थामा अब कसरी खपत बढाउने भन्ने कुरामा सोच्नुपर्छ । अब हामी यति वर्षमा यति विद्युत् खपत गर्न सक्छौं भन्न योजना बनाएर अगाडि बढ्ने अवस्था छ । हामीले कति वर्षमा ग्यास प्रयोग शून्य गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । ग्यासलाई मात्रै विस्थापित गर्न सक्दा मासिक दुई अर्ब रुपैयाँसम्म बचत गर्न सक्ने अवस्था छ । तेलमा पनि त्यही अवस्थामा खर्च गरिरहेका छौं, त्यसलाई कसरी कम गरेर ऊर्जा खपत बढाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
प्रस्तुति: विकास थापा/उत्तम काप्री(अन्नपुर्ण पोस्ट )